Filoha teny Antanimbarinandriana : « Aoka izay ny adihevitra tsy mampandroso » -
AccueilRaharaham-pirenenaFiloha teny Antanimbarinandriana : « Aoka izay ny adihevitra tsy mampandroso »
Nahitsy sady hentitra ny Filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Hery, omaly, teny amin’ny Epp Antanimbarinandriana nandritra ny fandraisam-pitenenany tamin’ny fitokanana ny tranom-boky sy ny foibe fanovozana teknolojia manoloana ireo mpanaratsy faly ny hanakiana fotsiny nefa tsy hanao zavatra. Aoka izay ny adihevitra tsy mampandroso, hoy izy. Andao hifaninana hampandroso an’I Madagasikara isika. Nofaritany tsara fa ho an’ny vahoaka, ho an’ny ankizy, ho an’ny tanora ary ho antsika rehetra ny fotodrafitrasa natao. “Androany vao nahita ny tranom-boky ny tenako, izao dia maninona? Inona izao no maharatsy an’izao? Raha mahavita dia manaova be dia be an’izao fa antsika hanao be dia be amin’izao. Fotodrafitrasam-panjakana ny fanabeazana, fotodrafitrasam-panjakana ny hitaizana ny tanora sy ny vahoaka ary ao anatin’ny fandrosoana izany satria mila izany isika eto amin’ny firenena. Ary entanina ny olona rehetra hanao fotodrafitrasa tahaka izany”, hoy ny Filohan’ny Malagasy, nanome hafatra ho an’ireo manao hafa tsy ny manaratsy.
Nambarany ihany koa fa efa nanoratra ny tantarany sahady ity tranom-boky ity, noho ny, sakantsakana natao tamin’ny fanamboarana ny fotodrafitrasa ary ireo tsy nankasitraka izany no nanoratra izany. “Tsy hanontany intsony aho, inona io trano io fa efa Madagasikara iray vohitra no nahita azy sy nahafantatra azy. Efa nanoratra ny tantarany sahady io trano io ary ny olona izay tsy nankasitraka azy, izy ireny indrindra no tena nanoratra ilay tantara satria nampahanfantatra hoe inona io atao io. Ny adinon’izy ireo dia izao, ho an’ny vahoaka io, ary rehefa asa ho an’ny vahoaka dia tokony hifaninanana fa tsy tokony hiadiana, tsy tokony ho sakanana”, hoy hatrany ny Filoha Rajaonarimampianina. Satria “Raha ireny olona hanakivy ireny no andrasana, olona mamingana dia tsy misy zava-bita eto. Fa isika kosa dia mandroso hatrany amin’ny asa fampandrosoana fa na aiza na aiza toerana hanaovana fampandrosoana dia Madagasikara izany, indrindra indrindra raha eto amin’ny renivohitr’i Madagasikara hanaovana fotodrafitrasa dia ho an’i Madagasikara izany ary misitraka izany ny vahoaka Malagasy”, hoy izy nanohy ny teniny. Noho izany, nampirisika ny olona rehetra hitodika foana amin’ny asa fampandrosoana ny Filoha. Satria tsy an’ny Rakoto sy Rabe ny tanàna fa an’ny vahoaka malagasy ary tokony hifaninana hanao fotodrafitrasa miantefa amin’ny vahoaka malagasy fa tsy mifanakivy sy mifanaratsy fotsiny.
Nandritra ny kabariny izay ihany koa, nanararaotra nisaotra ny vadiny manokana, Rajaonarimampianina Voahangy ny Filoha satria izy no nahandro nahamasaka ny foto-drafitrasa, niaraka tamin’ireo mpiara-miombon’antoka maro samihafa. “ Eto dia mankasitraka ny vadiko manokana tamin’ny fanatanterahana ny tranom-boky aho satria izy no lohalaharana hitarika ary tena manao ny ainy tsy ho zavatra mametraka fotodrafitrasa ho an’ny vahoaka, ho an’ny tanora, ho an’ny vehivavy, ary ho an’ny firenena. Ary na inona na inona tsy hitsahatra hitohy ny asany ho an’ny ankizy, tanora, vehivavy”, hoy ny Filoham-pirenena namarana ny teniny.